Ubax Cananaas qalalan + Cashar Video ah - Farsamooyinka Cunnada
Sida loo sameeyo ubax cananaaska qalalan oo qurux badan
Ma rumeysan kartaa ubaxdan quruxda badan in laga sameeyay cananaas la jarjaray? Daacad baan noqon doonaa, waan ka shakisanahay farsamadan marka hore! Laakiin dhab ahaantii way fududahay, oo waxay noqdeen kuwo aad u qurux badan!
karinta keega arooska cad iyadoo la isticmaalayo isku darka keega
Ubaxyadan cananaaska la qalajiyey waa calaal, macaan, iyo dhadhan fiican, waxayna ahaayeen qurxinta koobabka ugu fiican ee gabadhayda, xafladda dhalashada Avalon ee Moana-theed.
Markii aan koray waxaan aad u qalajinnay miro. Aabbahay wuxuu ku koray beer ku taal New Zealand sidaa darteed qasacadaynta, qaboojinta iyo qallajinta cuntada waxay ahayd dhaqan caadi ah oo ku xeeran gurigeenna. Midhaha aan jeclahay ee la qalajiyey waxay ahaayeen tufaax. Had iyo jeer aad uga macaan oo ka jilicsan nooca dukaanka la iibsaday.
Aabbahay wuxuu lahaa fuuq-baxa weyn oo alwaax ah oo isagu iskiis u dhistay sanad walbana waxaan soo uruurin jirnay miraha ugu badan ee aan kari karno, waxaanna ku kala bixinnay baakadaha mesh-ka iyo miraha qalalan Toddobaadyo waad urinaysay caraftaas miraha macaan ee ka soo baxaysa gurigeenna oo dhan ilaa wadada.
Anigu ma aanan qallajin miro badan oo ah rootiga laakiin sida ay gabadhaydu u sii gabowdo, waxaan u sii guurayay waxyaabo ay rabto inay samayso oo keliya laakiin cunayso. Marka keega sharaxaadda leh ayaa mararka qaarkood dhinac dhinac loo dhigaa si boos loogu helo Gummies macmal ah , muufkayaal shukulaatada, iyo buskudka sonkorta .
Iyada oo leh Moana mawduuca dhalashada soo socda, waan iska caabin kari waayey samaynta koobabka keega ubax ee cananaaska u wanaagsan ee la qalajiyey xafladdeeda!
Ubaxyada cananaaska ma fududahay in la sameeyo?
qumbaha qumbaha lagu kariyo caanaha qumbaha
Ugu dambeyntiina, kuwani waxay ahaayeen kuwo aad u fudud in la sameeyo oo gebi ahaanba waa AYAA UGU FIICAN! Qeybta ugu xiisaha badan waxay ahayd kaliya ka saarista 'indhaha' cananaaska.
Waxay sidoo kale igu qaadatay wakhti yar in aan helo hangoolka jarista cananaaska aad u khafiifsan. Waan ku adkeeyay naftayda waxaanan isticmaali jiray cananaaska aad u bislaaday, markaa aad buu u macaanaa oo jilicsanaa. Waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho cananaaska bislaaday hadii aad rabto ubax fiiqan. Maaddaama aan fuuqbaareyno ubaxyada, uma baahnin cananaas aad u bisil.
Ha welwelin, si fiican ugu riyaaq cunista canugga ubaxa diidan! Waxaad sidoo kale qallajin kartaa qaybaha cajiibka ah ee u muuqda waxaadna u isticmaali kartaa cunto fudud oo caafimaad leh. Yum!
Cunnooyinka keega ee loo yaqaan 'strawberry cake' oo leh miraha strawberries cusub ee xoqan
Talooyin ku saabsan samaynta ubaxyo cananaas oo aad u qalalan
Dooro cananaaska aan bislaanin. Cananaaska yar ee bislaaday ayaa qaabkooda sifiican u hayn doona marka la jarayo oo la jarayo.
Ha ka saarin xudunta. Ha u isticmaalin corer cananaaska si aad uga saarto maqaarka dibedda maxaa yeelay waxaad u baahan tahay xarunta oo dhawrsan si aad u sameysid ubaxyada cananaaska ah ee quruxda badan.
Ha ka welwelin geesaha jilicsan. Haddii jeexjeexyadaadu ay ku egyihiin wax yar oo jilicsan, waxay kaliya ku dareysaa muuqaalka guud ee qallafsan ee ubaxa.
Sida loo sameeyo ubax cananaaska qalalan
Kuleyli foornada 200ºF
Iska yaree kore iyo hoose ee cananaaskaaga mindi af badan
Jar maqaarka kore
Isticmaal diir baradho ah si aad uga saarto indhaha yar ee hareeraha cananaaska. Tani waxay igu qaadatay illaa 15 daqiiqo.
U jarjar cananaaskaaga si aad u khafiif ah oo ku rid xaleefyada tuwaallo waraaqo ah si aad uga saarto qoyaan badan.
Ku rid xaleefyada cananaaska xaashi buskud leh oo lagu dhajiyay silikoon dubista si looga hortago ku dhegidda
Dubo 90 daqiiqo (ka sii badan haddii aysan weli ku bunnixin hareeraha ama u muuqan qalalan). Isaga rog iyaga kadib 60 daqiiqo markaa kor u qaad xitaa qalajinta.
Markaad qallajiso, ka saar xaashida buskudka ku rid weel kafee ah si aad ugu qalasho habeenka heerkulka qolka.
Aaway ubaxyadii cananaaska
Roodhiyaasha koofurta waxay ubaxyo cananaas ah u adeegsadeen qurxin caan ah keega hummingbird. Keega Hummingbird wuxuu la mid yahay keega karootada laakiin karootada la'aanteed. Runtii waa dhadhan fiican oo lagu daray qaboojiyaha farmaajada.
Waxaad u isticmaali kartaa ubax cananaaska inaad ku qurxiso keega, keega iyo waxyaalaha kale ee macmacaanka ah! Waxay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan!
Mudo intee le'eg ayay ubaxyada cananaaska
Ubaxyada cananaaska waxay noqon karaan kuwo jilicsan oo jilicsan haddii aad ka tagto iyaga muddo dheer. Ku keydi weel hawo kulul leh heerkulka qolka illaa saddex maalmood laakiin runti, waxay qaadanayaan xoogaa waqti ah.
Ubax cananaaska qalalan ayaa aad u fudud in la sameeyo! Kaliya xoq oo jarjar cananaaska cusub, ku qalaji xaleefyada foornada kuna qaabee weel kafee ah. Waxaad jeclaan doontaa sida cajiibka ubaxyadan cananaaska ah ugu muuqdaan keega, keega iyo keega macmacaanka! Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:1 saac 30 daqiiqado Qalajinta:3 saacado
▢1 dhexdhexaad ah cananaaska aan bislaan
▢Shukumaanada waraaqaha ah
▢Derin dubista silikoon
Kuleyli foornadaada ilaa 225 darajo F.
Adoo adeegsanaya mindi kariyaha fiiqan, ka jar sare iyo hoose ee cananaaska.
U dhig cananaaska qumman, oo jarjar xargaha xargaha, adigoo maraya agagaarka cananaaska.
Dhamaadka fiiqan ee diirka baradhada, ka saar indhaha cananaaska, keydso hilibka inta aad karto.
Iyada oo ay ku taal cananaaska dhinaceeda, jarjar xaleef khafiif ah. Khafiifka ah ee aad heli karto, ayaa ubaxyadaadu u jilicsan yihiin.
Ku rid xaleefyada cananaaska warqadaha tuwaalka ah oo qalaji si aad uga saarto qoyaanka badan.
Ku rid xaleefyada cananaaska dubista xaashida dubista oo ay ku dheggan tahay silikoon silsilad ah oo dubi ilaa 90 daqiiqo, ama ilaa ay ka brown ku noqoto geesaha
In kasta oo jeexjeexyada ay wali diirran yihiin oo la jilcin karo, ka soo saar ubaxyada cananaaska xaashida dubista oo ku rid weel kafee ah si ay gebi ahaanba u qaboojiso.
Halooguu seexdo habeenka dusha sare miiska natiijooyinka ugu wanaagsan.
Ku keydi weel hawadu saarantahay dusha sare ilaa 3 maalmood.
sida looga sameeyo dhaxanta ukunta cad iyo sonkorta
sida loogu daro strawberries cusub isku darka keega
maxaad u isticmaashaa inaad ku cabiro garaam
keegga dhalashada ee cuntooyinka oo dhan rootiga